Ciidanka Xoogga Dalka oo Howlgal ku dilay 5 Maleeshiyo Shabaab ah iyo Horjoogahoodii | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Ciidanka Xoogga Dalka oo Howlgal ku dilay 5 Maleeshiyo Shabaab ah iyo...
Ciidanka Xoogga Dalka oo Howlgal ku dilay 5 Maleeshiyo Shabaab ah iyo Horjoogahoodii
Muqdisho (SNTV) Cutubyo ka tirsan ciidanka Xoogga Dalka oo howlgallo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ka fuliyay Deegaanka Baladul Amiin ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa dilay shan ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu ku jiray horjoogihii argagixisada hogaaminayay.
Ciidammadan ayaa ka ruqaansaday deegaanka Bariiri ee Gobalka Shabeelaha Hoose, iyagoo xooraan ku helay in deegaanka Baladul Amiin ay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ku suganyihiin, isla markaan ay dhibaato ay ka mid tahay dhac iyo qafaalasho ka wadaan deegaankaas.
Ciidanka lugta ee ka tirsan Xoogga dalka oo ka jawaabayay cabashada dadka deegaanka Baladul Amiin oo durba gaaray halkaasi, ayaa weerar aan waqti badan qaadan ku diley shan meleeshiyaadka Argagixisada ah iyo Horjoogihi watay kooxdaasi.
Saraakiisha Taliska Ciidanka lugta ee xoogga dalka ayaa ayaa balan qaaday in ay howlgalladan sifeynta ah laga soo jeesan doonin ilaa inta laga laga tirtirayo argagixisada Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaysa meelo ka mid ah Gobolka Shabeelaha Hoose.
Majirto wax khasaare ah oo gaaray dadka ku nool deegaanka Baladul Amiin oo horay dhibaato iyo qafaalba ugu haayeen argagixisada, balse ay ciidamada ku guuleysteen inay baabi’iyaan maleeshiyaadkii halkaasi dadka rayidka ah ku dhibeysay.
Deegaannada ay ciidamadu gaareen oo ay la wareegeen waxaa ka mid ah Tulooyinka Godale, Cadaleey, Luqamaan, Cilmi Shide iyo Baladul Amiin oo hoostaga Degmada Toora-Toorow ee Gobolka Shabeelada Hoose iyo goobo kale.
Argagixisada Al-Shabaab ayaa deegaanada kor ku xusan waxa ay dadka kaga qaadi jireen lacago baad ah, taasi oo ay ku bexeen ciidanka Xooga Dalka, kuwaasi oo weli baacsanaya firxadka Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya deegaanada miyiga fog ee Gobolka Shabeelada Hoose.
Shacabka ku nool deegaannada ay ciidamada xoogga dalka gaareen waxa ay tilmaameen inay aad ugu faraxsanyihiin sida ciidanka ay uga dulqaadeen argagixisada dhibaatada ku heysay, iyagoo balan qaaday inay la shaqeynayaan ciidamada xoogga dalka, si guud ahaan Gobolka looga cirib tiro maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo billad sharaf guddoonsiiyay Guddiga Qabanqaabada Maalmaha Xorriyadda
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo khudbad ka jeediyay shirka Baarlamaanada Adduunka ee ka dhacay Ruushka